မန်တလေး Sky Walk မီးလောငျမှု ည(၆း၀၈)နာရီမှ နံနကျ(၀၅:၀၃)အခြိနျထိ မီးငွိမျးခဲ့ရတဲ့ – Askstyle
မန်တလေး Sky Walk မီးလောငျမှု ည(၆း၀၈)နာရီမှ နံနကျ(၀၅:၀၃)အခြိနျထိ မီးငွိမျးခဲ့ရတဲ့
မန္တလေး Sky Walk မီးလောင်မှု ည(၆း၀၈)နာရီမှ နံနက်(၀၅:၀၃)အချိန်ထိ မီးငြိမ်းခဲ့ရတဲ့နောက်ဆုံးရသတင်
၁၇ – ၁ – ၂၀၂၀ရက်နေ့၊(၁၈ : ၀၈)အချိန်ခန့်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ချမ်းအေးသာစံ မြို့နယ်၊ ကဉ္ဇဏမဟီရပ်ကွက်၊ ၃၄ လမ်း၊ ၇၈ လမ်းထောင့် အလျား(၄၆၈)ပေ၊ အနံ(၄၅၀)ပေရှိ Basement + RC (၆)ထပ်၊ Mandalay Yatanar Mall ၊ Sky Walk ပထမအလွှာတွင် မီးလောင်မှု ဖြစ်ပွားနေကြောင်း ….
(၁၈:၁၀)အချိန်သတင်းရရှိသဖြင့် မန္တလေးမြို့ပေါ် မီးသတ်စခန်းများမှ မီးငြှိမ်းသတ်ယာဉ်(၈၂)စီး၊ ရေသယ်ယာဉ်(၅၀)စီး၊ မီးသတ်စက်ယာဉ်(၁၄)စီး၊ အထောက်အကူပြု ယာဉ်(၂၁)စီး၊ အုပ်ချုပ်မှုယာဉ်(၄)စီး၊ အထပ်မြင့်မီးသတ်ယာဉ်(၇)စီး၊ ပြင်ဦးလွင်မြို့နယ်မီးသတ်စခန်းမှ မီးငြှိမ်းသတ်ယာဉ် (၄)စီး…..
ရေသယ်ယာဉ်(၃)စီး၊ ကျောက်ဆည်မြို့နယ်မီးသတ်စခန်းမှ မီးငြှိမ်းသတ်ယာဉ်(၁)စီး၊ ရေသယ်ယာဉ်(၇)စီး၊ စစ်ကိုင်းမြို့နယ်မီးသတ်စခန်းမှ မီးငြှိမ်းသတ် ယာဉ်(၁)စီး၊ ရေသယ်ယာဉ်(၂)စီး၊ ဗဟိုမီးသတ်သင်တန်းကျောင်းမှ မီးငြှိမ်းသတ်ယာဉ်(၂)စီး၊ စုစုပေါင်း မီးသတ်ယာဉ်(၁၉၄)စီး၊ အုပ်ချုပ်မှုယာဉ်(၄)စီး….
အသက်ရှုကိရိယာ (၅၀) လုံး၊ မီးခိုးမှုတ်စက်(၆)လုံး၊ Engine Cutter (၁၀)လုံး၊ စည်ပင်မှရေသယ်ယာဉ်(၁၀)စီး၊ မန္တလေးမြို့တော်စည်ပင်သာယာရေး ကော်မတီမှ ဘတ်ဟိုးမြေတူးစက် (၄)စီး၊ သန္ဓေမီးသတ်တပ်ဖွဲ့ဝင်(၂၅၀)ဦး၊ အရန်မီးသတ်တပ်ဖွဲ့ဝင်(၅၀၀)ဦး၊ တပ်မတော်သား(၂၃၀)ဦး၊ မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်(၂၅၀)ဦး၊ကြက်ခြေနီ(၁၀၀)ဦး….
စည်ပင်ဝန်ထမ်း (၅၀)ဦးတို့နှင့်ပူပေါင်းငြှိမ်းသတ်ခဲ့ရာ (၁၈ – ၁ – ၂၀၂၀)ရက်နေ့၊ (၀၂ : ၀၂)အချိန် မီးထိန်းနိုင်ခဲ့ပြီး (၀၅:၀၃)အချိန် မီးငြိမ်းခဲ့ပါသည်။အဆိုပါ မီးလောင်မှုတွင် မီးငြှိမ်းသတ်ရေးလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်စဉ် အရန်မီးသတ်တပ်ဖွဲ့ဝင်(၅)ဦးတို့ ထိခိုက်ဒဏ်ရာ (မစိုးရိမ်ရ)ရရှိခဲ့ပါကြောင်းနှင့် မီးလောင်မှု အကြောင်းအရင်းနှင့် ဆုံးရှုံးမှုတန်ဖိုးအား စိစစ်စုံစမ်းဆဲဖြစ်ပါကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။MFSD
မန်တလေး Sky Walk မီးလောငျမှု ည(၆း၀၈)နာရီမှ နံနကျ(၀၅:၀၃)အခြိနျထိ မီးငွိမျးခဲ့ရတဲ့ နောကျဆုံးရသတငျး
၁၇ – ၁ – ၂၀၂၀ရကျနေ့၊(၁၈ : ၀၈)အခြိနျခနျ့၊ မန်တလေးတိုငျးဒသေကွီး၊ ခမျြးအေးသာစံ မွို့နယျ၊ ကဉ်ဇဏမဟီရပျကှကျ၊ ၃၄ လမျး၊ ၇၈ လမျးထောငျ့ အလြား(၄၆၈)ပေ၊ အနံ(၄၅၀)ပရှေိ Basement + RC (၆)ထပျ၊ Mandalay Yatanar Mall ၊ Sky Walk ပထမအလှာတှငျ မီးလောငျမှု ဖွဈပှားနကွေောငျး ….
(၁၈:၁၀)အခြိနျသတငျးရရှိသဖွငျ့ မန်တလေးမွို့ပျေါ မီးသတျစခနျးမြားမှ မီးငွှိမျးသတျယာဉျ(၈၂)စီး၊ ရသေယျယာဉျ(၅၀)စီး၊ မီးသတျစကျယာဉျ(၁၄)စီး၊ အထောကျအကူပွု ယာဉျ(၂၁)စီး၊ အုပျခြုပျမှုယာဉျ(၄)စီး၊ အထပျမွငျ့မီးသတျယာဉျ(၇)စီး၊ ပွငျဦးလှငျမွို့နယျမီးသတျစခနျးမှ မီးငွှိမျးသတျယာဉျ (၄)စီး…..
ရသေယျယာဉျ(၃)စီး၊ ကြောကျဆညျမွို့နယျမီးသတျစခနျးမှ မီးငွှိမျးသတျယာဉျ(၁)စီး၊ ရသေယျယာဉျ(၇)စီး၊ စဈကိုငျးမွို့နယျမီးသတျစခနျးမှ မီးငွှိမျးသတျ ယာဉျ(၁)စီး၊ ရသေယျယာဉျ(၂)စီး၊ ဗဟိုမီးသတျသငျတနျးကြောငျးမှ မီးငွှိမျးသတျယာဉျ(၂)စီး၊ စုစုပေါငျး မီးသတျယာဉျ(၁၉၄)စီး၊ အုပျခြုပျမှုယာဉျ(၄)စီး….
အသကျရှုကိရိယာ (၅၀) လုံး၊ မီးခိုးမှုတျစကျ(၆)လုံး၊ Engine Cutter (၁၀)လုံး၊ စညျပငျမှရသေယျယာဉျ(၁၀)စီး၊ မန်တလေးမွို့တျောစညျပငျသာယာရေး ကျောမတီမှ ဘတျဟိုးမွတေူးစကျ (၄)စီး၊ သန်ဓမေီးသတျတပျဖှဲ့ဝငျ(၂၅၀)ဦး၊ အရနျမီးသတျတပျဖှဲ့ဝငျ(၅၀၀)ဦး၊ တပျမတျောသား(၂၃၀)ဦး၊ မွနျမာနိုငျငံရဲတပျဖှဲ့ဝငျ(၂၅၀)ဦး၊ကွကျခွနေီ(၁၀၀)ဦး….
စညျပငျဝနျထမျး (၅၀)ဦးတို့နှငျ့ပူပေါငျးငွှိမျးသတျခဲ့ရာ (၁၈ – ၁ – ၂၀၂၀)ရကျနေ့၊ (၀၂ : ၀၂)အခြိနျ မီးထိနျးနိုငျခဲ့ပွီး (၀၅:၀၃)အခြိနျ မီးငွိမျးခဲ့ပါသညျ။အဆိုပါ မီးလောငျမှုတှငျ မီးငွှိမျးသတျရေးလုပျငနျးမြားဆောငျရှကျစဉျ အရနျမီးသတျတပျဖှဲ့ဝငျ(၅)ဦးတို့ ထိခိုကျဒဏျရာ (မစိုးရိမျရ)ရရှိခဲ့ပါကွောငျးနှငျ့ မီးလောငျမှု အကွောငျးအရငျးနှငျ့ ဆုံးရှုံးမှုတနျဖိုးအား စိစဈစုံစမျးဆဲဖွဈပါကွောငျး သတငျးရရှိပါသညျ။MFSD